လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လူမသိသော အဖြစ်အပျက် (၁၀)ချက်
၂၀၁၅ ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နှစ် ၁၀၀ပြည့်ခဲ့သည့် လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရ/မရနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငြင်းခုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သော အတုပ္ပတ္တိစာတွင်လည်း “ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ၆ နှစ်ခွဲနေခဲ့၍ နိုင်ငံရေး စိတ်သန်မှုကြောင့် ကျောင်းစာများ မလေ့ကျက်သဖြင့် ဘီအေအတန်းအထိ အောင်ရုံသာ အောင်ခဲ့သည်”ဟု အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။
“အောင်ဆန်းသည် အချိန်ပြည့် ကျောင်းသားနိုင်ငံရေး လုပ်နေသည့်ကြားမှ ၁၉၃၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပသော ဘီအေစာမေးပွဲကို အင်္ဂလိပ်စာပေ ခေတ်သစ် ရာဇ၀င်၊ နိုင်ငံရေး ဘာသာဗေဒများဖြင့် ချောမောစွာ အောင်မြင်သည်။ ၁၉၃၇-၃၈ ခုနှစ်တွင် အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းသား နိုင်ငံရေး သာမက တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး အတွက်ပါ ဆောင်ရွက်နေရကာ ဥပဒေ ပထမနှစ် စာမေးပွဲ ရှုံးလေသည်။ သူ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် နောက်ဆုံး ရှုံးခြင်းပေတည်း။ အောင်ဆန်းကား အောင်ထားသော ဘီအေဘွဲ့ကိုပင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်၌ တက်မယူပေ။ (ဗိုလ်ချုပ်အစ်ကိုဖြစ်သူ ဦးအောင်သန်း ရေးသားခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ အောင်ဆန်း မှတ်တမ်းများမှ)
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ကာလအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တော်လှန်ရေးအတွင်း လူတကယ် သတ်/မသတ် ငြင်းခုံပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ “၁၉၄၅ ခု နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဝန်ချုပ်က ဗြိတိသျှ အစိုးရ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဝန်ထံ စာတစ်စောင် ရေးသား ပေးပို့သည့် စာတွင် ၁၉၄၂ ဂျပန်တပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် မုတ္တမမှ သထုံသို့ ချီတက်လာစဉ် သထုံခရိုင် ပေါင်မြို့နယ် သဲဖြူကုန်းရွာ (သထုံမှ ၃၃ မိုင် အကွာ)တွင် ဘာဘူကြီး အဗ္ဗဒူရာရှစ်အား သထုံ ဘောလုံးကွင်း အတွင်း သတ်ဖြတ်မှု၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပါဝင် ပတ်သက်နေသည့် အတွက် တရားစွဲဆိုရန် အကြံပြုထားသည်”
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ဖဆပလအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူသော အချိန်၌ “သတင်းစုံ”ဂျာနယ် ကြေညာချက်ဆောင်းပါး “ကျွန်ုပ်၏ လိပ်ပြာကား အစဉ်သန့်ရှင်းလျက်”ဖြင့် အတိအလင်း ၀န်ခံထားပြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လူသတ်မှု ကျူးလွန်သည်ကို ဘုရင်ခံ၏ ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်များ အဖြစ် တာဝန်ယူနေသော သခင်ထွန်းအုပ်နှင့် သခင် ကျော်စိန်တို့က လိုအပ်လျှင် သက်သေလိုက်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကို ထိုးနှက်ခဲ့သော်လည်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မျှော်လင့်သလို ဗိုလ်ချုပ်သည် လူသတ်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်မကျခဲ့ပေ။ နောက်ပိုင်းတွင် သေပြီးသား အင်္ဂလိပ် စစ်သား အလောင်း ၃ လောင်းအား ခေါင်းဖြတ်ခဲ့ပြီး သူရဲကောင်း သဖွယ် ပြုမူခဲ့သည့် သခင်ထွန်းအုပ်၏ အဖြစ်အပျက်ကို သတင်းစာများက ထုတ်ဖော်ပြီး အရှက်ခွဲခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မကွေးတိုင်း နတ်မောက်မြို့နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် အတွက် အင်္ဂလိပ်စကား သင်ကြားပေးရန် ကျောင်းကောင်းကောင်း မရှိခဲ့ပေ။ အသက်ရှစ်နှစ်သား အရွယ်အထိ ကျောင်းမနေခဲ့ဘဲ နောက်မှသာ နတ်မောက်ရှိ ဒီပင်္ကရာကျောင်း ခေါ် ဦးသောဘိတကျောင်းသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားသည်။ ထိုကျောင်းသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်သော်လည်း အတန်းကျောင်း ဖြစ်သောကြောင့် လောကဓာတ် ကျောင်းဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရေနံချောင်း အမျိုးသားကျောင်းမှ အောင်မြင်ပြီး တက္ကသိုလ် ရောက်သည့်အခါ တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆောင် အမှုဆောင် ရွေးချယ်ပွဲတွင် အောင်ဆန်း၏ ဋ္ဌာန်ကရိုဏ်း မကျသော အင်္ဂလိပ် စကားကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ လှောင်ပြောင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး မစ္စတာ စလော့၏ ခွေးများကို ထိန်းကျောင်းရသော စကော့တလန် လူမျိုး ၀ီလီယံနှင့်အတူ အင်းယား ကန်ဘောင်တွင် မနက်တိုင်း လိုက်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့သည့်အတွက် အောင်ဆန်းသည် အင်္ဂလိပ် တစ်ဦး နှင့်မခြား ပြောဆိုလာနိုင်သည်။
ဗမာ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ခေတ်တွင် ဘီဒီအေ အရာရှိများကို မင်္ဂလာဒုံရှိ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။ ထိုအချိန်က သင်တန်းဆရာ အများစုမှာ ဂျပန်များဖြစ်ပြီး နောင်တစ်ချိန်တွင် တပ်မတော်၏ တပ်မှူးကြီးများ ဖြစ်လာမည့် ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးကြည်မောင်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်တို့ အပါအ၀င် တပ်မတော် အရာရှိငယ်များ သင်တန်း တက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ ထိုသင်တန်းတွင် ပြင်းထန်သော စစ်ပညာများကို သင်ကြားရသည့် သင်တန်းသားများမှာ အထူး ပင်ပန်းလျက်ရှိသည်။ သို့သော် သင်တန်း ဆရာများက သင်တန်းသားများကို “One Die, Nevermind. Two Die, Nevermind. Three Die, Nevermind. All Die, Nevermind."ဟု ပြောကြားသည့်အတွက် အားလုံး မကျေမနပ် ဖြစ်သွားသည်။ နောက်မှ ထိုစကားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြောကြားခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပြီး အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းကို တန်ဖိုးထားသော တပ်မတော် ဖြစ်စေရန် မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြမှသာ အရာရှိ သင်တန်းသားများ စိတ်ဆိုးပြေသွားကြသည်။
Copied from Tomorrow Journal